Waa kan muuqaalka labaad ee hadhka leh, xusuusnow? Waa farsamo aad u fiican oo ka kooban ku soo noqnoqoshada ereyba erey iyadoo la mid ah iskudhafka waxa uu dhasho. Marka waxaad ku sameyn kartaa hoos-u-dhigista baqbaqaaq ama farsamo waxyaabo badan: hees, marin laga soo qaado filim, hadal, fiidiyowyadeyda! Xulku aad buu u ballaaran yahay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato qoraalka, dhegeyso oo ku celiso, waa intaas! Maxaa hadheeyay? waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo ku dhawaaqidaada laakiin kaliya maahan, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku shaqeyso dhawaaq, waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa ereyada adoo baranaya ereyo cusub. Waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa qaab dhismeedka xukunka, fiiri sida loogu dhisay hadal ahaan. Waa ilo aan la koobi karin oo ka mid ah faa'iidooyinka barashada, waxaan kuu xaqiijinayaa. Haddii aad ku horreyso hadalka, waad kalsooni badan tahay, markaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad aad u dhiirrigeliso inaad wax badan barato oo aad horumar sii kordhiso xitaa, waa wareeg wanaagsan.
Tilaabada 3: Dhageyso qoraalka oo dhan kuna celi qoraalka oo dhan iskood u duub naftaada Ku celi talaabooyinka 2 iyo 3 jeer inta aad u baahan tahay Ku celcelin ahaan waa inaad awood u yeelan doontaa inaad horumariso xirfadahaaga hadalka.
Miyaad ku hagaajisaa ku dhawaaqidaada Fransiiska Shadowing? Koorso 2 July 10th, 2021Tranquillus
horeMiyaad ku hagaajisaa ku dhawaaqidaada Fransiiska Shadowing? Koorso 1
socdaSidee si joogto ah loo xafidi karaa ereyadaada?